Teacher Profile: Zu Zu Aung Ko Ko
Zu Zu Aung Ko Ko has dreamt of beingateacher fromayoung age. She was in large part inspired by her mother who is alsoateacher and her biggest role model. Zu Zu currently teaches at Kay Gyi Kone Monastic School near Mandalay, Myanmar’s second biggest city. In her free time, she also follows in the creative footsteps of her father, an artist, and enjoys painting, sewing and singing. After completing some of the basic Studer Trust Teacher Training Center’s (TTC) programs, she identified English as one of her weaker skills that she wanted to improve. So when Studer Trust offered an English Online Course (EOC), she jumped at the opportunity.
English had always beenastruggle for Zu Zu throughout her education. She often got the lowest of her scores in this area, and her English teachers avoided asking her questions as they knew she wasn’t able to answer. These experiences caused her to feel embarrassed and guilty. With this in mind, she found the motivation to work hard and improve her English.
Having taken her first TTC course with Studer Trust, she felt immediately comfortable as she had never experienced suchasafe and secure learning space. She saw the teachers as her role models and also admired their ability to speak English, giving her confidence in the programming. This encouraged her to sign up for the EOC, using the Rosetta Stone curriculum, despite initial fears about her ability to complete the program.
There were many obstacles along the journey for Zu Zu, which she faced head-on. As the main source of income for her family, she had to carve out times in her already busy day to participate in courses and complete homework. She was also placed in an advanced group that she initially wasn’t prepared for. However, despite the challenges, she prevailed through extremely engaged participation and rigorous and determined after-hours studying. Zu Zu was deemed one of the most vocal students in her courses, and engaged in3hours of nightly studying. Specifically, with the help of the Rosetta Stone application, she was able to identify certain hard-to-pronounce words that she practiced over 100 times in order to perfect.
In the end, Zu Zu completed and took the exams on units 1-20 of the Rosetta Stone application in order to ultimately get 100% on all of them. As one of the youngest teachers in her school, this, along with other TTC programs, has helped her gain the recognition and trust of parents and has also helped her adjust her mindset and philosophy around teaching practices in general. Studer Trust is proud and excited to see her succeed in her career asaprofessional teacher and to continue to provider her opportunities to grow and improve.
ဆရာမ ဇူးဇူးအောင်ကိုကိုအကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဇူးဇူးအောင်ကိုကိုက ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် သူမရဲ့ အကြီးမားဆုံး စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကိုအားကျခဲ့ရတဲ့အတွက်ပါ။ လက်ရှိမှာ ဇူးဇူးက မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ ကံကြီးကုန်းဘုန်းတော်ကြီးသင်စာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာ သင်ပြလျက်ရှိပါတယ်။ အားလပ်ချိန်တွေမှာတော့ ပန်းချီဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖခင်ရဲ့ ဖန်တီးမှုလမ်းစဉ်ကို လိုက်လေ့ရှိပြီး ပန်းချီဆွဲ၊ စက်ချုပ်၊ သီချင်းဆိုရတာတို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ Studer Trust ရဲ့ အခြေခံ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဆရာနည်းပြသင်တန်း (TTC)တက်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာက သူမတိုးတက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုဆိုတာကို သိလိုက်ပါတယ်။ Studer Trust က အွန်လိုင်းကနေတဆင့် သင်ကြားပေးမယ့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတစ်ခုကို ဖိတ်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဇူးဇူးက ဒီအခွင့်အရေးကို ယူလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပညာရေးတစ်လျှောက်မှ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အမြဲအခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ စာမေးပွဲတွေမှာ အမှတ်အနည်းဆုံးရလေ့ရှိသော ဘာသာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာဆရာ၊ ဆရာမများက ထိုဘာသာရပ်တွင် အားနည်းသော သူမကို ဖြေနိုင်မည်မထင်သည့်အတွက် စာမေးမြန်းခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါ။ ဒီအတွေ့အကြုံများကြောင့် ဇူးဇူးတစ်ယောက် အရှက်ရခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတော့ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် တိုးတက်လာရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ မိမိကိုယ်ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ နွေးထွေးလုံခြုံမှုရှိတဲ့ သင်ကြားရေးနေရာတစ်ခုကို သူမ မကြုံဖူးသော်လည်း Studer Trust က စီစဉ်တဲ့ TTC သင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ချက်ချင်းပဲ လုံခြုံနွေးထွေးမှုကို ခံစား ရလာပါတယ်။ ဆရာတွေကို သူမရဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်မြင်လာပြီး သူတို့တွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်တွေကို အားကျလာပါတယ်။ဒါကနေတစ်ဆင့် ဇူးဇူးက ပိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ သင်တန်းကို ပြီးမြောက်အောင်မတက်နိုင်မှာကို စိုးရိမ်ခဲ့သော်လည်း Rosetta Stone သင်ရိုးညွှန်းကို အသုံးချတဲ့ EOC အစီစဉ်ကို တက်ရောက်ဖို့ စာရင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇူးဇူးအတွက် သူမရဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အခက်အခဲများစွာကို တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမမိသားစုအတွက် သူမကအဓိက ထောက်ပံ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ချိန်တွေနှင့် ပြည့်နေတဲ့ကြားကပင် သင်တန်းတက်ရောက်ဖို့နှင့် အိမ်စာတွေလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ သူမပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိ သေးသည့် သင်တန်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် နေရာချထားခြင်းခံရပါတယ်။ သို့သော်လည်း အခက်အခဲများကြားကပင် ဇူးဇူးတစ်ယောက် စနစ်တကျ ကြိုးစားသင်ယူပြီး အတန်းတွင်း လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ရုံသာမက သင်တန်းချိန်အပြီးတွင်လည်း ပိုပြီးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ သင်တန်းများတွင် အတော်ဆုံးသင်တန်းသားများထဲက တစ်ယောက်လို့ပင် မှတ်ယူခံခဲ့ရသည့်အဆင့်ထိရောက်ရှိလာပါတယ်။ ထိုရလဒ်များရရှိနိုင်ရန်ညစဉ် သုံးနာရီကြာ လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ Rosetta Stone အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုပြီး အသံထွက်ရခက်ခဲသောစကားလုံးများကို အသံထွက်မှန်ကန်လာသည်အထိ အခေါက်ပေါင်း တစ်ရာကျော် လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဇူးဇူးက Rosetta Stone အက်ပလီကေးရှင်းမှ တဆင့် ယူနစ် ၁ မှ ၂၀ အထိ စာမေးပွဲများကိုပြီးမြောက်အောင် ဖြေဆိုခဲ့ပြီး အမှတ်ပြည့်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမစာသင်ကျောင်းတွင် အငယ်ဆုံးဆရာ၊ ဆရာမများထဲက တစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် ဤအောင်မြင်မှုများအပြင် တစ်ခြားသော TTC အစီအစဉ်များကြောင့် ကျောင်းသားမိဘများ၏ ယုံကြည်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ စာသင်ကြားရေးနှင့် ပတ်သက်သော အတွေးအခေါ်၊ အလေ့အထများကိုပါ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရာတွင်အောင်မြင်မှုရရှိလာသည်ကို မြင်ရသည့်အတွက် Studer Trust အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ နောင်တွင်လည်းဇူးဇူးကို ပိုပြီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေမည့် အခွင့်အရေးများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လည်းစိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပါတယ်။